Wareysi: Dr. Georgi Kapchits - WardheerNews
Odhaahda Tifaftirka: Waxaanu akhristayaasha WardheerNews la wadaagaynaa waraysi xiise badan oo aanu la yeelanay Dr. Georgi Kapchits oo ah khabiir aad isugu taxalujiya ururinta iyo baadhista afka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Dr. Kapchits waxa uu ka waramayaa suugaanta iyo maahamaahyada Soomaalida iyo barashadiisii Afka Soomaaliga. Waraysigani waxa uu horey ugu soo baxay WardheerNews bishii Janaayo sandkii 2006. Waraysigan waxa u qaaday WardheerNews Khaliil C/raxmaan X. Xasan.
Waxaa jirta maahmaah tidhaahda “waayeel afkaaga fur, ilkahaaga aan tiriyee lama yidhaahdo”. Kaftan weeye nin furfuran baan ahay. Dr. Georgi Kapchits
Dr. Georgi Kapchits waxaa uu ka mid yahay aqoonyhanada sida gaarka ah isugu taxalujiya ururinta iyo baadhista afka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Waxa uu muddo dheer ka soo shaqeeyay laanta Afka Soomaaliga ee Radiyo Moosko, isagoo isla markaana Luqadda Soomaaliga ka dhigi jiray Jaamacado ku yaal magaalada Moosko.
Dr Kapchits: Sifooyinka aan kor ku xusay si buuxda bay uga muuqdaan dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida, aad iyo aad bayna ii soo jiitaan. Bal eega:Nin baa nin u soo hoyday habeen. Markaasaa ninkii loo soo hoyday si wanaagsan u sooray ninkii ku soo hoyday. Markaasna waxaa jirtay abaar xun. Ninkii loo soo hoyday meel wanaagsan ayuu seexshay ninkii ku soo hoyday. Waagii markuu beryay ayuu ninkii loo soo hoyday haddana u keenay sahay iyo biyo uu ku dhul maro. Markaasaa ninkii martida ahaa ku yiri ninkii uu soo martiyey: ‘Ninyohow! Si wanaagsan ayaad ii gashay, marka maxaad jeceshahay in aan kuugu abaalgudo? Ma shan jeer baan kuu abaalgudaa, mase shan goobood baan kaa sheegaa?’ Markaasaa ninkii la soo martiyey yiri: ‘Waxaad iga sheegtaa shan goobood.’ Sheekadanui mid faallo u baahan ma aha.
Halkan ka kahriso: Wareysiga_Dr. Kapchits
Dr. Georgi Kapchits waxaa uu ka mid yahay aqoonyhanada sida gaarka ah isugu taxalujiya ururinta iyo baadhista afka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxa uuna qoraaladiisa ku soo bandhigaa degelka WardheerNews